Qof caqli leh ayaa yaqaan waxa la yiraahdo. Qofka caqliga leh wuu ogyahay inuu dhaho iyo in kale. - qarsoodi - Quotes Pedia
A qofka caqliga leh waa qof yaa garanaya waxa laga dhihi karo xaalad kastoo jirta. Khibrad uu ka soo helay noloshu waxay siinaysaa qarka u saaran dadka kale inay ka sii saadaaliso xaalad kasta oo ay u dhaqmaan sida ugu habboon. Waa muhiim in aan wax ka baranno nolosheena oo aad si farsamo leh u saxaan khaladaadka aan galay waqtigii hore.
Fiisigiska caanka ah iyo fikirka Albert Einstein wuxuu mar yiri qof aan waligiis khalad sameynin waligiis isku dayin wax cusub. Ereyadan fudud ayaa runtii macno badan leh haddii si taxaddar leh loo fiirsado. Waa inaan lahaano nafteena oo aan u isticmaalnaa si aan ula qabsano xaaladaha sida aan u doorano.
Mararka qaarkood tani waxay noqotaa mid lagama maarmaan ah marka aan hareereyno dhibaatooyin badan, iyo xallinta waxay umuuqdaan inay dhammaadaan. Akhrinta buugaagta iyo ka-qaybgalka wada sheekaysiga miro dhal ah oo leh maskax furfuran ayaa naga caawin doonta inaan shakhsi ahaan iyo bulsho ahaanba ku koraan.
Sidoo kale waa inaan nafteena u adeegsanaa waqtiga aadka loogu baahan yahay si aan uga fikirno go'aanadeena oo aan si macquul ah uga fikirno. Si aad u noqoto qof caqli badan, marka hore, waxaad u baahan tahay inaad caqli badan tahay.
Farshaxannimadu kuma timaaddo oo kaliya labisashada wanaagsan ee ku haynta muuqaalka kore ee muuqaalka leh, laakiin sidoo kale waxay ka timaadaa maskaxda oo ugu dambayntii way nadiifisaa jidhka iyo nafta oo dhan. Waxay had iyo jeer u fidineysaa dibedda waxayna dadka ka caawineysaa inay ka soo kabtaan dhibaatooyinkooda iyagoo horumar wanaagsan ku bixinaya xagga nolosha.
Dhex-dhexaadinta iyo hurdada saxda ah, oo ay weheliso cunto caafimaad leh iyo yoga, waxay caddeyn karaan faa iidooyin xagga is-dejinteena oo aan ka koobnay waqtiyada adag. Xusuusnow dadku waa inay had iyo jeer diirada saaraan inay noloshooda u noolaadaan oo aysan u noolaan kuwa kale.
Go'aannada iyo xulashooyinka nolosheena waa inay ahaadaan kuwo lagu hago nidaamkeena fikirka iyo caqliga. Waa inaannaan nafteenna luminin annagoo si fudud u raacna amarrada iyo fikradaha kale.
Sax ama khalad, noloshu, dhamaadka, had iyo jeer waxay naga caawineysaa inaan noqono waxa ugu fiican. Qof caqli badan ayaa had iyo jeer dhageysan doona wax ka yar isla markaana ku hadla si ka yar, sidaa darteed, dhab ahaantii waa ogyahay goorta la hadlayo, meesha laga hadlayo, iyo inuu hadlo iyo haddii kale. Aamusnaanta runti waa hub ka xoog badan ereyada.
Ahaanshaha Smart Quotes
Xigashooyinka qofka wanaagsan
Xigashooyinka hormarinta shaqsiyeed
Xigashooyinka Kobcinta Shaqsiyeed
Xigashooyinka dhiirigalinta shaqsiyeed
Shakhsiyaadka Shakhsi ahaaneed
Quotada Smart Man
Xigashooyinka dadka smart
Xigashooyinka Smart Qofka
Nin caqli badan Maahmaah
Nin xigmad leh xigasho
Erayada Caqliga Leh
Qof xigmad leh xigashooyin
Kalidaa ma ahan dareen marka aad keli tahay. Kalidaa waa dareen marka qofna dan ka lahayn. - Qarsoodi
Kalinimo ma aha dareen marka aad keli tahay, waa nooc shucuur ah oo aad u janjeersato…
Ha is barbar dhig, kaliya abuur. - Qarsoodi
Aadanaha oo dhami waa dastuur isku mid ah laakiin waxay ku kala duwan yihiin kartida. Kulligeen waxaan hibo ku leenahay qaar…
Uma baahni nolol qumman. Kaliya waxaan rabaa inaan faraxsanaado, oo ay hareereeyaan asxaab fiican oo i jecel kan aan ahay. - Qarsoodi
Ma jiro qof noloshiisa kaamil ah oo sida ugu dhaqsaha badan ee aad awood ugu yeelan karto inaad fahanto, ayaa ka sii wanaagsan!